डा विनोद घिमिरे नसर्ने रोगको बिगबिगी सँगै वर्तमान समयमा योग चिकित्साको महत्व बढ्दै गएको छ । सामायन्तया शरीर भाँच्नु तथा छिटोछिटो सास तान्दै पेट हल्लाउनुलाई योग भनेर बुझ्ने चलन छ । तर यति मात्रै योग होइन यी त योगका केही सामान्य अभ्यासहरु मात्र हुन् । त्यसैले योगका बारेमा विस्तृत जानकारी हुनु आवश्यक छ । योग शब्दको अर्थ जोड्नु हुन्छ । आत्माको पर आत्मासँगको मेल वा जोडलाई योग...
प्रिय इशिका, मैले तिम्रो इमेल पाएँ । दोहोर्‍याई-तेहेर्‍याई धेरैचोटि पढेँ । लागेको थियो- सात समुद्रपारि पक्कै पनि शान्तसँग बाँचेकी हौली । बोस्टनको व्यस्त शहरमा आ-आफ्नै लयमा ढकमक्क फुलिरहेका शिरीषका रङ्गीन फूलहरूसँग मन फुकाएर हाँसेकी हौली । तर, तिमी त मनमा समुद्रको अशान्त छाल बोकेर पो बाँचेकी रै’छौ ! प्रिय सखी ! तिम्रो इमेल पढेपछि मेरो मनको तलाउमा पनि ज्वारभाटा...
लोकसेवाको विज्ञापन नरोकियोस् !
देशमा बेरोजगारीको समस्या र त्यसमा पनि शैक्षिक बेरोजगारहरुको संख्या बढ्दो छ । यस्तो स्थितिमा निजामती सेवाप्रति चौतर्फी रुपमा आकर्षण देखिन्छ । लोकसेवा परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीमाझ अहिले जिज्ञासा बढेको छ, यस वर्ष लोकसेवा आयोगले नयाँ विज्ञापन गर्छ कि गर्दैन ? यसका साथै परीक्षा १ वर्ष र अझ २ वर्ष नै खुल्दैन रे भन्ने हल्ला बजारमा चलिरहेका छन् । अर्कातिर,...
वित्तीय स्रोतः सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको छैन
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ/गाउँसम्म पुगेको रटान नलगाउने सायदै कोही होला । तर, यी अधिकार प्रयोग गर्न संविधानले ठाउँ/ठाउँमा रोक लगाएको छ । यति मात्र हैन, सरकारले पनि स्थानीय तहलाई यसो गर उसो गर भन्ने निर्देशानात्मक आदेश जारी गरेको छ । सिद्धान्ततः स्थानीय तह/सरकार संवैधानिक होस् वा नहोस् कुनै पनि निकायले स्थानीय तहलाई खास परिस्थितिबाहेक आदेश दिन मिल्दैन । आदेश दिनु...
पहाडी क्षेत्रको गठबन्धन मधेसमा फलिफाप हुन्छ ?
राष्ट्रिय जनता पार्टीका दोस्रो तहका एक नेताले सामाजिक संजालमा आक्रोश पोख्दैलेखेका थिए –राजपाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार फलाना (संघीय समाजवादी फोरमतिर संकेत गर्दै) लाई कसले दियो ? चुनावमा जाने, नजाने निर्णय राजपाले गर्नेछ अरूले हैन । र, फोरमलाई प्रथम चरणको निर्वाचनमा भागलिएकै कारण निकै सरापेका थिए । मलाई त्यो आक्रोश अस्वाभाविक लागेको थिएन । प्रथम चरणमा...
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विगतको छवि त्यति राम्रो छैन । उनलाई ‘पावर हंगर’ का रुपमा चित्रित गर्ने गरिएको छ । उनी चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । अब देउवाले आफ्नो कार्यशैलीमा के-के सुधार गर्नुपर्छ ? र, उनीबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? यसबारे हामीले राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन अचार्यलाई सोधेका थियौं ।जवाफ आचार्यकै शब्दमाः शेरबहादुर देउवाले सुधार...
डा. शेरबहादुर पुन जिका भाइरसको चर्चा सन् २०१५ पछि खासै भएको छैन। खासगरी, जिका संक्रमणले टाउको सानो भएको बच्चा एकपछि अर्को ठूलो मात्रामा देखिन थाल्यो भनेर सुन्नमा आएको छैन। तर प्रश्न उठ्छ, सन् २०१५ (अक्टुबर तिर) मा मात्र किन यति धेरै (दुई हजारभन्दा बढी) संख्यामा देखियो होला त यो समस्या? विश्व स्वास्थ संगठन (डब्लुएचओ) ले हालै मात्र ब्राजिलको स्वास्थ मन्त्रालयसँग मिलेर गरेको...
डा. गान क्वान मलाई यो कुरा व्यक्त गर्दा निकै दुःख लाइरहेको छ। तर, यो यथार्थ हो। नेपालमा हरेक वर्ष २५ हजारभन्दा बढी मानिसले चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेकै कारण अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। यो संख्या निकै ठूलो हो। एक वर्षमै यति धेरै नागरिकको ज्यान लिने यो महामारीलाई रोक्न सकिन्छ। यतातिर सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। नेपालमा दुई वर्षअघि विनाशकारी भूकम्प गयो। भूकम्पले...
नेपालमा ऊर्जा मिश्रणको आवश्यकता
इ. रामराज शर्मा राजधानीलगायत मुख्य सहरहरू लोडसेडिङ्ग मुक्त भए । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने वाचा फेरि पनि दोहोर्‍यायो । केही नीतिगत सुधारहरु गरिए । उदाहरणका लागि ऊर्जा खरिद दर हिँउद र बर्खाको लागि १०० मेगावाटसम्मका 'रन अफ द रिभर' आयोजनाका लागि ४.८ र ८.४ रुपियाँ कायम गरियो । जलाशय युक्त आयोजना र 'पिकिङ्ग रन अफ द रिभर' आयोजनाका लागि नयाँ...
आधारहीन प्रचारवाजी कि चुनाव घोषणापत्र
विक्रम आचार्य स्थानीय चुनावको रन्को सबैलाई लागेको छ । प्रमुख दलदेखि वैकल्पिक भनिएका दलले समेत मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । सबैका घोषणापत्र हेर्दा लाग्छ, अब देशले १० वर्षभित्रै र नभए पनि २० वर्षमा अवश्य काँचुली फेर्नेछ । अर्थात् उनीहरूकै घोषणा पत्रलाई आधार मान्ने हो भने नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पनि ५ हजार अमेरिकी डलर...
कस्ता–कस्ता मतदाता !
पूरै २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनलाग्दा उमेदवारमात्र होइन मतदाता प्नि हौसिएका देखिन्छन् । तर, निर्वाचनपछि देशले गति लिन्छ भनेर आशा गरेका जनताले भोट कसलाई दिने भनेर मापदण्ड बनाएको भने पाइँदैन । यी यी गुण भएका उमेदवारलाई आफ्नो मत दिने हो भन्नुको सट्टा उही पुरानै शैलीमा मतदान गर्न आतुर देखिन्छन् । कस्लाई मत दिने भन्ने विषयमा धेरैको प्रतिक्रिया यस्तो पाइन्छ...
यो साता नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकको चर्चा खूब चल्यो। घटना मानवीय संवेदनासँग जोडिएको हुनाले पनि यसले आम सर्वसाधारणको ध्यान तान्नु स्वाभाविकै हो। दुर्गम हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा बस दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएकालाई जति सक्दो चाँडो उपचारको आवश्यकता थियो। त्यसैले उनीहरूलाई हेलिकप्टरबाट सिधै मनिपाल...
अस्पताल फार्मेसी : कसरी पन्छाउने चुनौतीका चाङ?
सुस्मिता शर्मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विश्वका हरेक नागरिकको अधिकार हो। नेपालको संविधान २०७२ ले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानको मर्म अनुरूप नागरिकलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी हरेक सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार छ। अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्तहुने स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवामा फार्मेसी सेवा पनि एक हो। यहाँ फार्मेसी सेवा...
प्रकाश अधिकारी - नेपाल र भारतको सदियौँ पुरानो कुटनीतिक सम्बन्ध मात्र नभएर रोटी र बेटीको सम्बन्ध अर्थात सामाजिक साँस्कृतिक सम्बन्धलाई नेपाली राजनीतिमा आज अलग ढंगले व्याख्या गर्न थालिएको छ । कुटनीतिक सम्बन्धका आफ्नै मूल्य र मान्यता रहन्छन् । एउटा निश्चित सिमाभित्र बाँधिएर कुटनीतिक मर्यादाको पालना गर्ने गरिन्छ । तर पछिल्लो दिनहरुमा नेपाल र भारतको औपचरिक र अनौपचारिक...